Softwares | Jolay 2022
Emulator Android tsara indrindra ho an'ny Windows 10
Mitady Emulator Android tsara indrindra ho an'ny Windows PC-nao? Eto izahay dia nitanisa ireo emulator Andorid 5 be mpampiasa indrindra tamin'ny Windows tamin'ny 2020.
Mitady emulator an'ny iOS amin'ny birao? Amin'ity lahatsoratra ity dia nitanisa ireo emulator iOS 10 ambony izahay izay azo ampiasaina mora foana amin'ny PC.
Ny lozisialy fanovana horonantsary dia mitondra anao ny fahafaha-manao amin'ny fanaovana horonantsary mahatalanjona. Nitanisa lisitra rindrambaiko 10 fanovana horonantsary tsara indrindra ho an'ny Windows izahay.
Bluestacks vs Nox App Player - Ny fampitahana farany (2020)
Na izany aza, mieritreritra izay Android Emulator no tsara indrindra eo amin'ny Bluestacks sy Nox App Player? Eny, nanoratra comaprison antsipirihany izahay eto.
Tsy afaka mampiasa Final Cut Pro amin'ny Windowsas ianao, amin'ny Mac OS ihany no misy azy. Noho izany, eto izahay dia nitanisa ireo safidy 15 tsara indrindra na maimaim-poana na karama.
Noho izany, raha manana fahalalana momba ny fanaovana beat ianao dia azonao atao ny misintona mora foana ny rindrambaiko fanaovana Beat Free ary andramo ny tananao.
5 Alternatives iMovie tsara indrindra ho an'ny Windows 10
Amin'ny alàlan'ny iMovie dia azonao atao ny manitsy ny horonan-tsarinao amin'ny fomba tsara indrindra. Satria tsy misy iMovie ho an'ny Windows, dia nitanisa safidy hafa izahay.
Milamina ve ny Bluestacks? Eny, azonao ampiasaina amin'ny Windows & Mac
Na izany aza, mitady valiny izay manazava ny fisalasalanao rehetra momba ny fiarovana ny BlueStacks? Ireo manampahaizana ataonay dia manamafy izany fa azo antoka aorian'ny famerenana amin'ny antsipiriany.
Na izany aza, mpampiasa IOS maro no nanomboka nitady safidy iTunes hafa satria Apple dia nanomboka nandao ny iTunes. Ireto misy rindrambaiko vitsivitsy toy izany.
Ahoana ny fomba hanovana ny M4A ho MP3?
Misy fomba maro isan-taonina hanovana ny M4A ho endrika MP3. Afaka mampiasa fitaovana an-tserasera sy an-tserasera mifanaraka amin'ny fahafaham-ponao ianao.
Teams dia fampiharana navoakan'i Microsoft. Navoaka tamin'ny fitaovana rehetra izy io, anisan'izany ny iOS, Android, Windows, ary Mac.
Mikasa ny hahazo PS4 fa tsy manana teti-bola amin'izany, fa manana PC kosa ianao? Raha eny, zahao ireo emulator PS4 tsara indrindra ho an'ny Windows 10.
Safari ho an'ny Windows 10 - Azo alaina amin'ny fomba ofisialy?
Apple dia nanjanona ny fanohanana Safari ho an'ny windows. Ny fanontaniana lehibe eto dia ny hoe, mbola azo atao ve ny mampiasa Safari amin'ny windows? Vakio eto.
Alternatives TeamViewer tsara indrindra tokony hozahanao (2020)
Na eo aza izany, na eo aza ny maha-zava-dehibe azy, ny mpiray tarika aminy dia manana fatiantoka manokana. Noho izany, eto izahay dia nitanisa ireo safidy Alternative TeamViewer tsara indrindra tamin'ny taona 2020.
Tencent Gaming Buddy dia iray amin'ireo emulator tsara indrindra manerantany. Izy ireo izao dia mifantoka amin'ny PUBG satria izy no lalao nalaza indrindra.
ny fomba fampidinana zoom amin'ny solosaina
mandefa horonan-tsary avy amin'ny solosaina mankany amin'ny chromecast
Kaody fampiroboroboana fitsapana maimaim-poana amin'ny youtube tv
iOS 9 emulator ho an'ny pc
ny fomba hahazoana premium crunchyroll maimaim-poana
mpilalao mozika vlc ho an'ny android